Manohitra ny Fampanambadiana Ankizy Ao India Ireo Mpivarotra Tranolay ho an’ny Lanonana · Global Voices teny Malagasy
Manohitra ny Fampanambadiana Ankizy Ao India Ireo Mpivarotra Tranolay ho an'ny Lanonana
Voadika ny 15 Mey 2016 2:12 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, Italiano, Nederlands, Aymara, 繁體中文, srpski, Français, 简体中文, English
Fampivadiana ankizy ve ity? Sary avy amin'ny flickr an'i Naga Rick (2009) CC BY-NC-ND
Tonga nisakana ny fampanambadiana ankizy ireo mpivarotra tranolay ao amin'ny fanjakan'i Rajasthan ao India andrefana. Maherin'ny 47.000 tamin'izy ireo no nanambara fa tsy hanome tranolay ho an'ireo lanonana izay ahitàna ankizilahy kely na tovovavikely atao fanambadiana ary hangataka taratasy fanamarinam-pahaterahana mba hanamarinana ny taona. Hampandre ny mpitandro filaminana eo an-toerana izy ireo hoy ny filazany raha fantany fa misy fampanambadiana ankizy mizotra.
Tahaka ny hita any min'ireo faritra hafa erak'izao tontolo izao dia olana goavana ny fampanambadiana ankizy ao India. Manakana ny fanatanterahana izany ny Lalàna tamin'ny 2006 momba ny Fanambadian'ny Ankizy, manamafy fa 18 taona ho an'ireo ankizivavy ary 21 taona ho an'ireo zazalahy no taona ara-dalàna ahafahana mirotsaka anaty fanambadiana. Na eo aza anefa izany, laharana faha-13 i India ao anatin'ny tatitra “Ireo Toerana Mamaivay Isian'ny Fanambadian'ny Ankizy” nataon'ny Ivon-toerana Iraisam-pirenena ho an'ny Fikarohana momba ny Vehivavy. Ny fanisàna tamin'ny taona 2011 dia nampiseho fa manakaiky ny 17 tapitrisa ireo ankizy Indiana eo anelanelan'ny 10 ka hatramin'ny 19 taona – maneho ny 6% amin'io sokajin-taona io – no manambady.
Mandray fepetra maro ny governemanta mba hampihenana ny fampanambadiana ankizy, anisan'izany ny filazàna fanentanana mba hanemorana ireo fanambadiana. Na izany aza, anatin'ireo vohitra ahitana toe-piaina ara-toekarena ambany dia ambany, matetika dia atolotra ho vady mialohan'ny taona ara-dalàna tokony hanambadiany ireo ankizivavy satria midika izany fa mihena iray ny vava-homana ao amin'ny fianakaviana. Nitarika hatezeram-bahoaka tao amin'ny media sosialy ny lahatsary iray miafina navoaka vao haingana izay mampiseho zazavavikely vao dimy taona monja mitomany fa noterena hanambady zazalahikely 11 taona tao anatin'ny lanonana faobe tao Chittorgath, Rajasthan.
Ao anaty aterineto, mitehaka ny fanambaran'ireo mpivarotra tranolay ny olona ary nitsangana hanohitra ny fampanambadiana ankizy. Nitsikera tao amin'ny Facebook i Kiran Agarwal fa tsy maintsy miara-miasa ny vondrom-piarahamonina mba hanamelohana ity fampiharana ntaolo ity:
Ahoana no ahafahantsika miantso ny tenantsika ho mivoatra miandalana raha toa ka miroborobo ny fomban-drazana ratsy tahaka izao. Isika rehetra tokony ho mailo anatin'ny toerana tsirairay misy antsika mba hahafahan'ireo manam-pahefana ao an-toerana mandray ireo fepetra ilaina hanenana izany.
.Ary nanoratra i Mimu Chakraborty hoe:
Hantsoina ho firenena mandroso i India amin'ny fotoana hieritreretany momba ny fanabeazana ny ankizy fa tsy mikasika ny fanambadiany aorian'ny fahaterahan'ny zazavavikely iray.